Tag Archive for "अरुण" - पाँच बर्षमा बिजुली बाल्न अरुण तेस्रोको शिलान्यास !
पाँच बर्षमा बिजुली बाल्न अरुण तेस्रोको शिलान्यास !
सुजन बज्राचार्य सङ्खुवासभा । पाँच वर्षमा जलविद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको अरुण तेस्रो आयोजनाको पावर हाउस निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शतिशकुमार शर्माले मङ्गलबार चिचिला गाउँपालिकामा पर्ने पुखुवामा विद्युत् गृह निर्माणको शिलान्यास गरेका छन । उनले तोकिएको समयमा अरुणबाट बिजुली निकालिसक्ने बताए । बाँध क्षेत्रमा पनि धमाधम काम भइरहेको उनले बताए । बाँध क्ष... थप पढ्नुहोस्
स्वदेशी लगानीमा माथिल्लो अरुण निर्माण हुने, प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ७४ पैसा लागत लाग्ने अनुमान
काठमाडौं । नेपाली जनताको लगानीमा करीब एक हजार मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । आयोजनाको संरचनाअनुसार कूल लगानीको ४९ प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । सो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य संस्था तथा कम्पनीकोसमेत शेयर लगानी हुनेछ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढ... थप पढ्नुहोस्